ကာတွန်း Ath - ဆံပင်ညှပ်ခသက်သာသူ လူကြီးမင်းများ
>indian activist ended his fasting - fight against corruption
>two elected MPs arrested
>Burmese Not so senior Politician - Down with the Regime's Parliment
ဆောင်းယွန်းလ ● လုပ်ပွဲများ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ ကျောသားနဲ့ ရင်သားခွဲခြားထားမှ တဘက်ဘက်မှာ တည်တည်တန့်တန့် ရပ်နိုင်မယ် အခု ကိုယ်ရပ်နေတာက ကျောပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး လမ်းပေါ်မှာ ကျောနံပါတ်လေး အရေးပေးပြီးကြည့်ခဲ့မိပါတယ် လုပ်ပွဲကြီးတွေနဲ့ တည့်တည့်တိုးခဲ့ပေါ့ ရင်ဘတ်ကိစ္စအတွက် ရင်ဘတ်ကို အလေးထားပြီးနားထောင်ခဲ့မိပါတယ် လုပ်ပွဲကြီးတွေနဲ့ မလွဲခဲ့ပြန်ဘူး အိမ်ထဲမှာနေရင်း အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ် လမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားရင်းလည်း အချိန်တွေကုန်ခဲ့တယ် ကိုယ့်အတွက်အထင်နဲ့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပဲ ကုန်လွန်ခဲ့သောအချိန်များ နိုင်ငံရေးမှာလည်း ရှုံးခဲ့တယ် အနူပညာလည်း ဆုံးခဲ့တယ် ဘောလုံးပွဲတွေထဲမှာလည်း မှားခဲ့တယ် မှားနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးနဲ့ မမှားတဲ့ လုပ်ပွဲကြီးများ။ ဆောင်းယွန်းလ No tags for this post. Related posts No...
စိုးခိုင်ညိန်း ● ဘဝဆည်းဆာချိန် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ ပြီးခဲ့တဲ့တရက်က ရွာက အမေ့အိမ်ကို အလည်ပြန်ရောက်နေတဲ့ညီက ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်ပါသည်။ တယောက်နဲ့ တယောက် သာကြောင်းမာကြောင်းတွေပြောပြီး အမေနဲ့ပြောလိုက်ပါဦးဟု ပြောသည်။ အမေနဲ့ပြောပြီးတော့ အမေက မင်းညီမနဲ့ ပြောလိုက်ပါဦးဟုပြော၍ ပြောရပြန်သည်။ ညီမကလည်း သူနဲ့ ပြောပြီးတော့ အမေကြီးနဲ့ ပြောဦးမလားဟု မေးကာ အဘွားနဲ့ ပြောခိုင်းနေပြန်သည်။ အမေကြီးက ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောမယ်လို့ ပြောပေမဲ့ အမေကြီးက မပြောချင်ပါဘူးအေဟုဆို၍ စကားမပြောလိုက်ရပေ။ အခုချိန်အထိ ဖုန်းဖြင့် အဘွားနှင့် စကားတခါမှ မပြောဘူးပါ။ အဘွားသည် ကျွန်တော်နှင့်သာမဟုတ်၊ ဖုန်းဖြင့် စကားပြောရသည်မှာ နားထောင်ရတာရော၊ ပြန်ပြောရတာရော အားမရဟုဆိုကာ မည်သူနှင့်မျှ ဖုန်းဖြင့် ပြောလေ့မရှိပေ။ အမေ၏...
ကာတွန်း သြဇာသီးရဲ့ နီးလာပြီဟေ့ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သြဇာသီး Related posts ကာတွန်း သြဇာသီးရဲ့ သေချာလုပ်ပါ အမတ်မင်းရဲ့ (0) ကာတွန်း သြဇာသီးရဲ့ အခွန်မရှောင်တဲ့သူတွေ (0) ကာတွန်း သြဇာသီး ● ရောင်းသူမဲ့တွေ (0) ကာတွန်း သြဇာသီး ● မေမေရေ … စားချင်တယ် (0) ကာတွန်း သြဇာသီး ● ဖေ့ဘုတ်ခ် ခက်ဆစ် (0)
မဇ္ဈိမလှိုင်းဝိုင်းတော်သားကြီး တေးရေးတေးဆို ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင် ဈာပန အခမ်း အနား မြင်ကွင်းများ K (မိုးမခ) ဇူလိုင်၊ ၁၄၊ ၂၀၁၈ ပန်းရဲ့လမ်းဖခင်ကြီး ကိုရဲလွင်ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ဆေးရုံသစ်ကြီး ကုတင် ၅၀၀ ဆေးရုံမှာ အသည်း ရောဂါကုသနေရာမှ ဇူလိုင် ၁၀ရက် ညနေ ၄နာရီ ၁၀မိနစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ဇူလိုင် ၁၄ရက် နေ့လယ် ၁နာရီမှာ တေးရေးတေးဆို ကိုရဲလွင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ရန်ကုန်မြို့ရေဝေးသုသာန်မှာ မီးသဂြိင်္ုဟ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဈာပနအခမ်းအနားသို့ ရွှေည၀ါဆရာတော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဇြိုးမင်းသိန်း၊ မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုး၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်များ၊ ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင်ရဲ့ဂီတရဲဘော်များ၊ ဂီတချစ်မြတ် နိုးသူများ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဂီတမိတ်ဆွေများ မီဒီယာများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။...
ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ ကိုယ်စားပြုသူ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း မင်းထက်လူ Related posts ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့လွတ်လပ်စွာဝေဖန်ကြပါ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ လျှော်ကြမယ် ဖွပ်ကြမယ် (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အကြီး အသေးပဲ ကွာတယ် … (0) ကာတွန်း မင်းထက်လူရဲ့ အဆင်ပြေတယ်မလား ဒါရိုက်တာကြီး (0)
သစ်ကောင်းအိမ် ● အမြည်းများ …
သစ်ကောင်းအိမ် ● အမြည်းများ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ အနော်ရထာလမ်းမ … ဘုရင့်နောင်ညဈေး …. ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား .. ဗန္ဓုလထီဆိုင် ..တဲ့ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လူမျိုးကမှ အညတြစစ်သည်တွေရဲ့နာမည်ကို သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လမ်းတွေ အမည်မပေးကြပါဘူး … ဗန်ဂိုး မသိဘူး…. ဗန်ဒိန်းပဲ သိတယ် မင်းသုဝဏ် မသိဘူး.. မယ်ကုဝဏ်ပဲ သိတယ်..တဲ့ ဒါဖြင့်…ဆရာဇော်ဂျီကိုရောလို့ ဆက်မေးတော့ ဇော်ဂျီဆိုတာ …..ဟို.. အနီရောင်ဝတ်စုံနဲ့လူမဟုတ်လား… ဆေးကြိတ်တယ်လေ မိုးပေါ်ပျံဖို့ တောင်ဝှေးလေးတောင်ပါလိုက်သေး… ဆိုသလို လူ့ပြည်မှာ လူ့အခွင့်အရေးလေးပေးခိုင်းမိပါတယ် (မရတဲ့အပြင်..) လူဖြစ်လျက်က လူ့အခွင့်ရေးသင်တန်းတွေ အပေးခံရ… ဒီမိုကရေစီတောင်းပြီး ဒီပရက်ရှင်ရခဲ့တဲ့ ငါတို့မျိုးဆက်ပေါ့…. ရင်ခွဲဇရပ်ပေါ်မှာ ရင်ခွဲပြီး ရင်ကြားပြန်စေ့ခံရတဲ့ ငါတို့မျိုးဆက်ပေါ့…. ဘုံဝါဒ...
ကမ်လူဝေး – ​တော်​လှန်​​ရေးရဲ​ဘော်​
​တော်​လှန်​​ရေးရဲ​ဘော်​ ကမ်လူဝေး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ လင်းလက်​ခွင့်​ရမယ်​အထင်​နဲ့ ကြယ်​တပွင့်​ဖြစ်​ချင်​ခဲ့။ လှိုင်းထန်​တဲ့​ကောင်းကင်​မှာ ကြယ်​ပွင့်​​တွေဟာ ​ကြွေ။ ကိုယ်​ပိုင်​အလင်းမဲ့ တပါးသူရဲ့အလင်းနဲ့​ရောင်​ပြန်​လင်းတဲ့ လမင်း ​ကောင်းကင်​မှာထင်းထင်းကြီး ​နေရာယူလို့။ ​လောကကိုအလင်းမျှဖို့ ကြယ်​တပွင့်​သာ ဖြစ်​ချင်​ခဲ့သူ။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးကျော်ဇင် ● မိုးရွာသောနေ့ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော် အိပ်ရာထသောအခါ နံနက် ၆ နာရီတ်ိတိ ရှိပြီ။ ကောင်းကင်က ခဲသားရောင် မျက်နှာကြက်ကိုချိတ်ဆွဲထား၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မှုန်မှိုင်းနေသည်။ အိမ်ထဲတိုးဝင်လာသည့် အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေထဲ အအေးဓာတ်က သိသိ သာသာ ပိုကဲနေသည်။ သည်နေ့လည်း မိုးရွာလိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲက ကျိတ်၍ မှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်။ သည်နှစ်မိုးဦးက မေလ၏ တတိယပတ်လောက်မှာပင် မြင်းရိုင်းတကောင်လို ကဆုန်ပေါက်ပြေးဝင်လာခဲ့လေသည်။ မျက်နှာသစ်ပြီး အိပ်ခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ ညက သမီးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ရသော အနှီးတွေကို စုထည့်ထားသည့် ဂျပ်ထူပုံးကို မ ယူလာခဲ့သည်။ ခုတင်ပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကမ္ဘာနှစ်ခုသည် အိပ်မောကျနေကြဆဲ။ ညက တညလုံး ၂ လအရွယ် သမီး ကလေး၏ ကရိကထ...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၆)
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၆) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ တရုတ်ပြည်မကြီးတွင် တနှစ်ကြာနေထိုင်ပြီးနောက် ဘုန်းကြီးလေးဒလိုင်းလားမား တိဗက်ပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ ဒလိုင်း လားမားဘုန်းကြီးလေး တိဗက်ပြည်ကို ပြန်ရောက်လာပြီဆိုသောသတင်းက တိဗက်ပြည်သူတွေကို ပျော်ရွှင်အားတက် စေခဲ့ သည်။ ဒလိုင်းလားမားကိုယ်တိုင်အတွက်တော့ အိမ်အပြန်ခရီးက ပျောရွှင်စရာမဖြစ်ခဲ့။ သူထွက်ခွါသွားခဲ့တုန်းက တိဗက် သည် ယခုသူမြင်တွေ့နေရသော တိဗက် မဟုတ်တော့။ တိဗက်ပြည်ကနေ သူထွက်ခွါခဲ့သည့်တနှစ်ဆိုသော အချိန်တိုကလေး အတွင်းမှာပင် တိဗက်ပြည်ကား မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်မကြီးကနေ လာဆာမြို့တော်ဆီကို ဆက်သွယ်ထားသည့် အမြန်လမ်းမ ကြီးနှစ်ခုသည် ပြီးဆုံးသွားလေပြီ။ တချိန်က ဆူညံသံကင်းပြီး အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်လှသည့် လာဆာမြို့တော်က အခုတော့ အရင်လို မဟုတ်ပါလေတော့။...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံသစ်ကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်စွမ်းရည် – လူထုဂျာနယ်စာပေပြိုင်ပွဲ (၁၉၅ဝ) လူထုကြီးပွားရေးစာအုပ်တိုက် နှစ် ၈ဝ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဆောင်းပါး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ လူထုကြီးပွားရေးစာအုပ်တိုက် နှစ် ၈ဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ပြုလုပ်မယ်လို့ကြားတော့ ဝမ်းသာရတယ်။ ကျွန်တော်က လူထုကြီးပွားရေးဆိုတာကို ကျွန်တော့်မိဘများနဲ့အတူ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖတ်လာခဲ့ရတာဆိုတော့ ”အစွဲ” ရှိပါတယ်။ လူထုကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရင် ခေါင်းထောင်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ”အစွဲ” ပေါ့နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄-၅ နှစ်လောက်က မြောက်အီလီနွိုက်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ကို မွှေခွင့်ရတယ်။ စာကြည့်တိုက်မှူး၊ ဒေါ်မေကြည်ဝင်း ပြုစုပျိုးထောင်သွားခဲ့တဲ့ မြန်မာစာကြည့်တိုက်ပါ။ ဒေါ်မေကြည်ဝင်းဆိုတာ အလွန်တော်တဲ့ စာကြည့်တိုက်မှူးပါ။ ဗမာပြည် က အလွန် အစုအဆောင်းကောင်းတဲ့ စာရေးဆရာ၊ စာပေသုတေသီ တွေ ကွယ်လွန်ရင် သူတို့စုဆောင်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကို...
ထွန်းသိန်းဦး – စာပေဂျာနယ် နှစ် သုံးဆယ် ပြည့်ပြီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးနှင့်တွဲ၍ မှတ်မိနေသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်က စာပေဂျာနယ် ဖြစ်ပါ သည်။ စာပေရေးရာနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ဝေဖန်ရေးသားမှုများ၊ မြန်မာစာပေနယ်တွင် ထင်ရှားသည့် စာပေ ပညာရှင်များ၊ စာပေဝေဖန်ရေးသမားများ၏ လက်ရာများအပြင် အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ စာပေသမားများ၏ သုံး သပ်ဝေဖန်ချက်များ၊ စာပေရေးရာအမြင်များ၊ စကားဝိုင်းများဖြင့် အားပြည့်အင်ပြည့်အားပြည့် ပါဝင်သည့် စာ ပေဂျာနယ်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် စတင်ထွက်ရှိခဲ့ရာ ယခု (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်) နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်ပြီ။ အတွဲ (၁) ၊ အမှတ် (၅) ပါ အယ်ဒီတာစကား...
လူထု နှစ် ၈၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲနဲ့ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော် ဇူလိုင် ၁၅ရက် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာ၊သတင်းစာဆရာ လူထုဦးလှနဲ့ စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာတို့ ထူထောင်ခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ရဲ့အသည်း နှလုံးတခုဖြစ်တဲ့ လူထုစာအုပ်တိုက် နှစ် ၈၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲနဲ့ စာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို မန္တလေးမြို့ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းလမ်း (၈၄လမ်း)နှင့် ၃၃လမ်းဒေါင့်၊ လက်ဆည်ကန်ရပ် အမှတ် ၂၂၁ရှိ လူထုစာအုပ်တိုက်မှာ ပြုလုပ်သွား မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇူလိုင် ၁၅ ရက်ကနေ ၁၇ ရက်နေ့အထိ လူထုတိုက်တည်ရှိရာ အမှတ် ၂၂၁၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း (၈၄လမ်း) နှင့် ၃၃ လမ်းဒေါင့်၊ လက်ဆည်ကန်ရပ်နဲ့ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နဲ့ ၁၇ ရက်တို့မှာ...
ကာတွန်း ATH – ဆေးရုံကြီးကျောက်တိုင်
ကာတွန်း ATH – ဆေးရုံကြီးကျောက်တိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဘောလုံးကွင်းဧရိယာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဂျူနီယာဝင်း၊ စွယ်စုံကျမ်းမိတ်ဆက်၊ မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၈ ဘောလုံးကွင်း ဧရိယာသည် အရှည်အားဖြင့် ကိုက် ၁၀၀ ကနေ ကိုက် ၁၃၀ ( မီတာအားဖြင့် ၉၀ မိတာ ကနေ ၁၂၀ မီတာ) ရှိကာ အကျယ်အားဖြင့် ကိုက် ၅၀ ကနေ ကိုက် ၁၀၀ ( ၄၅ မီတာကနေ ၉၀ မီတာ) ရှိပါသည်။ ပုံ – ဘောလုံးကွင်းတစ်ခု။ သို့သော် သည်ထက်လည်း အရှည်က ပိုရှည်လျှားသွားသည့်အတိုင်း အကျယ်ကလည်း ကျယ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိုးတိုင်သည် ၈ ကိုက် ( ၇.၃ မီတာ) ကျယ်ပြီး ၈ပေ (၂.၄...
မောင်မိုးသူ – အောက်ဆုံးက လူ (ကုမုဒြာအွန်လိုင်းဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၈ ပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဒေါ်လာဈေးတွေ အဆမတန်မြင့်တက်လာပြီး တစ်ဒေါ်လာ ကို ကျပ် ၁၃၇၀ ကျော်အထိ တက်ပြီးခါမှ တန့် သွားပါသတဲ့။ ဒေါ်လာဈေးတက် တာ နဲ့ ဘကြီးမိုး ဘာဆိုင်သလဲလို့ မမေးပါနဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ဘကြီးမိုးက စာရေးဆရာ။ ရေးသမျှ စာရေးခတွေ၊ ဆောင်းပါးခတွေက အားလုံး ကျပ်ငွေနဲ့ပဲရတာ။ သည် တော့ ဒေါ်လာဈေးတက်တာနဲ့ ဘာဆိုင် လို့လဲလို့ မမေးပါနဲ့၊ ဒေါ်လာဈေးတက် တော့ မြန်မာ ကျပ်ဈေးက ကျတယ်ခင်ဗျ၊ မြန်မာကျပ် ဈေး ကျဆင်းလာတဲ့အရှိန်က အောက်ဆုံး ကလူဖြစ်တဲ့ ဘကြီးမိုးအပေါ် ပိတော့တာ ပေါ့။ စာမူခ...
မောင်အောင်မွန် – ကိုယ်တွေ့ 8 July 1962
မောင်အောင်မွန် – ကိုယ်တွေ့ 8 July 1962 ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၃၄၅) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၈ (၁) ကျွန်တော်သည် သတင်းသမား (Professional News Writer) အဖြစ်ခံယူထားသူမို့ ဤဆောင်းပါးပါ အချက်အလက် တစ်ခုမကျန် မှန်ကန်ကြောင်း တာဝန်ခံကြောင်းထပ်ပြောကာ ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။ မြန်ပြည်တွင် မြန်မာ့အသံ၌ နှစ်(၂၀)၊ နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်၊ ကုလသမဂ္ဂ ပြန်ကြားရေးဌာန၊ UNCEF တို့၌ ဘာသာပြန်၊ Radio Moscw ၌(၃) နှစ်၊ ဘန်ကောက်တွင် အလွတ်သတင်းထောက်အဖြစ်(၃)နှစ်၊ VOA ၌ (၁၅)နှစ်လုပ်ပြီးနောက် အနားယူကာ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် စာရေး စာဖတ် Resaerch လုပ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်7July 1962...
သွေး(စစ်ကိုင်း) ဘာသာပြန်တဲ့ ၀င်းတင်(သို့မဟုတ်) ဦးမညွှတ်တတ်သော အတိုက်အခံ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာမ သွေး(စစ်ကိုင်း)ရဲ့ဘာသာပြန်လက်ရာသစ်တခုဖြစ်တဲ့ ၀င်းတင်(သို့မဟုတ်) ဦးမညွှတ်တတ်သော အတိုက် အခံ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်သံဈေး ငါးလွှာရှိ Yangon Book Plazaမှာ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်(စနေနေ့) နေ့လယ် ၂ နာရီမှာ ပြုလုပ်ကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ ဆိုဖီမာလီဘိုးပြုစုရေးသားတဲ့ ဦးဝင်းတင်၏ဘ၀မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို စာရေးဆရာမ သွေး(စစ်ကိုင်း)က မူရင်းပြင်သစ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ မူရင်းစာရေးဆရာမရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ် ဘာသာပြန်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရေးဆရာမ သွေး(စစ်ကိုင်း)က “ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေးတို့ အတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့တဲ့ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဘ၀မှတ်တမ်းကို နောက်ခံနိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ထောင်တွင်းဖြတ်သန်းမှု သတင်းစာဆရာသမားဘ၀၊...
ကျော်မောင် (တိုင်းတာရေး) ● အိုးကြီးချက် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ တယောက်စာ အတွက် ချက်ပြုတ်ရတာက လွယ်တယ်လို့ ဆိုကြလေ့ရှိတယ်။ အများအတွက်ဆိုရင် ချက်ပြုတ်သူရဲ့ စီမံမှုအပေါ် မူတည်သွားတယ်။ စားသောက်မယ့်လူတွေရဲ့ ရှိရင်းစွဲအရသာကို ပြင်ပေးနိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ ရခဲ့ကြဖူးတဲ့အရသာ အဟောင်းတွေ အရသာအကောင်းတွေကို ပြန်လည်တမ်းတစေခွင့် ရှိတယ်။ အရသာအသစ်တွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးနိုင်ခွင့် ရှိတယ်။ သုံးလေးငါးယောက်ရှိတဲ့ မိသားစုမှာတောင် အကြိုက်ချင်းမတူတာကို အစပ်အဟပ်တည့်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်တာဟာ ရိုးရိုးသာမန်အိမ်ထောင်စုတွေမှာရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ လေးစားလောက်တဲ့ အတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အိုးကြီးချက်ဆိုတာက ပညာတရပ်ပဲ။ အိုးကြီးချက်ဆိုလို့ သတိရမိတဲ့ စားဖိုမှူးကြီးတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဘ ဟင်းချက်တတ်တာကို စပြီး သတိပြုမိတာ အဲဒီငါးဟင်းက စတာပဲ။ ငါးတော့ငါးပဲ။ ငါးအမျိုးအမည်လည်း အခုထိ...
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား Related posts ကာတွန်းဆွေသား ● အစည်းအဝေး စနေပြီ (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ ယောင်နေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ အဆင့်မြင့် ဘယာကြော်တွေ ရမယ် … (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ တရားစောင့်နတ် (0) ကာတွန်း ဆွေသား ● ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ (0)
ညိုထက်ညို ● တဖန် ပြန်လည်နိုးထနိုင်ခြင်းမရှိသောဝေဒနာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ထိုနေ့ည သန်းခေါင်ကျော် ၁၂နာရီ နှင့် ၂ နာရီကြားတွင် ရှိရင်းစွဲဖြစ်သော နှလုံးရောဂါ၏ ဒုတိယံမ္ပိတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရကာ အဖေ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။ ကွယ်လွန်ချိန်တွင် အဖေသည် မီးပိတ်ထားသောဧည့်ခန်းထဲက သူ ထိုင်နေကျ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်လျက်သားအနေအထားဖြင့် ရှိနေပြီး သေခြင်းတရားသည် အဖေ့ထံသို့ တိတ်ဆိတ်စွာ ရောက်လာခဲ့ဟန်တူပါသည်။ ထို အဖေ့ထံသို့ရောက်လာခဲ့သောသေခြင်းတရားက ထားရစ်ခဲ့သည့်ခြေရာများနောက်သို့ ကျွန်တော် နောက်ယောင်ပြန်ခံ လိုက်ကြည့်မိပါသည်။ ◊◊◊ လွန်ခဲ့သော ၁၃ နှစ် ခန့်က အဖေသည် နှလုံးသွေးကြောပိတ်သည့်ဝေဒနာကိုခံစားခဲ့ရ၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက်၍ နှလုံး သွေးကြော အစားထိုးလဲလှယ်ကုသသည့် bypass ကုထုံးကိုခံယူ၍ အသက်ဆက်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ခံယူရာတွင် ကုသသည့် ဆရာဝန်များက...
မောင်ရစ် – ဖေ့စ်ဘွတ်ပရိသတ်ကြီး အဆင့်မြင့်ကြဖို့အရေး (အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၈) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ မတ် ၂၁ မှာ အင်တာနက်သတင်းတွေအရ Cambridge Analytica နည်းပညာဆက်ဆံရေးကုမ္မဏီဟာ ၂၀၁၆ ဇွန်လကတည်းက ဖေ့စ်ဘွတ် ပရိသတ်ရဲ့ သန်း ၅၀ရဲ့ ဒေတာတွေကို စုဆောင်းခဲ့တယ်၊ အဲသည်ဒေတာမိုဒယ်နဲ့ ထရန့်သမ္မတကင်ပိန်းအတွက် အသုံးချခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ အဲသည်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး စိတ်ဆိုးကြတယ်၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရမယ်လို့ တောင်းဆိုသူတွေ တောင်းဆိုနေကြတာကြောင့် အဲသည်အုံကြွမှုကို တုန့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ထူထောင်သူ ဇူကဘတ်က မီဒီယာရှေ့ကိုထွက်ပြီး ရှင်းလင်းရာမှာ ‘အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားခဲ့ဖို့’ နဲ့ ရှေ့လျောက်သင်ခန်းစာယူပြီး ပြုပြင်သွားမယ်’ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲသည်...
The Poetry of Emotion and Color အမည်ရတဲ့ စုပေါင်းပန်းချီပြပွဲ လောကနတ်မှာ ပြသမယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ The Poetry of Emotion and Colorလို့ အမည်ပေးထားပြီး ပန်းချီဆရာ ကြီးငယ်လတ်အစုံပါဝင်တဲ့ စုပေါင်း ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ပန်းဆိုးတန်း အောက်ဘလောက်ရှိ လောကနတ် ပန်းချီခန်းမမှာ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်ကနေ ၁၅ရက်နေ့ထိ ပြသ သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပါဝင်ပြသမယ့် ပန်းချီအနုပညာရှင်များကတော့ ခင်မောင်ရင်၊ ၀င်းဖေ၊ ကြီးမြင့်စော၊ MAUNG AW၊ ၀င်းဖေမြင့်၊ ကျော်စိန် ၀င်း၊ တင်ဦး၊ မြိုင်သန်းဦး၊ ဇော်ဝင်းဖေ၊ မောင်မြင့်အောင်၊ ရင်ဇော်ထူး၊ SAI၊ ကျော်လင်း၊ အေးငြိမ်းမြင့်၊ အောင်ကျော်ဆန်း၊...
ကဗျာဆရာ မောင်နွေထက် ကဗျာရှည်စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ တောင်သမန်မှာ ပြုလုပ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ မန္တလေး အခြေစိုက် ကဗျာဆရာ မောင်နွေထက်ရဲ့နီမောင်းသော အရှေ့ကောင်းကင်ခွပ်ဒေါင်းအောင်လံ ငါ့နိုင်ငံတော် အမည်ရတဲ့ကဗျာစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကို အမရပူရမြို့နယ်တောင်သမန်အင်းစောင်းရှိ တောင်လေးလုံးကျောင်းတိုက်မှာ ဇူလိုင် ၁၁ ရက် မနက် ၉နာရီမှ ၁၁နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကဗျာရှည်စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ကဗျာဆရာမောင်နွေထက်မှ အမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ကာ ကဗျာဆရာ ကိုလေး(အင်းဝဂုဏ်ရည်)၊ မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ)၊ ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ ဦးမြတ်မင်းသူ၊ စိုးနိုင်(မန်းတက္ကသိုလ်) မုဒိတာ စကားများပြောကြားပြီး ကဗျာဆရာများ၊ ကဗျာချစ်မြတ်နိုးသူများ မီဒီယာများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ ကဗျာရှည်စာအုပ်ကို the Key collection စာအုပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်ပြီး ကဗျာဆရာ မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) က အမှာစာရေးသားထားပြီး မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေထားကာ ဆရာဇော်ထွန်းက...
မောင်လူရေး – နတ္ထိပစ္စယော (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၈ ပင်လုံညီလာခံမှာပြောသည့် ကာချုပ်မိန့်ခွန်းကို နားထောင်ရသည့်မှာ နားကြောစိမ့်လှ၏။ ပီတိကိုယ်လုံး ဖုံးလေသည်။ ကာချုပ်သည် အနုပညာဆန်လွန်းသည်။ တင်ပြပုံမှာလည်း ရသမြောက်လွန်းသည်။ မိန့်ခွန်းကို နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်း မြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းတော့မည်ဟု တထစ်ချမှတ်လိုက်မိပေတော့သည်။ ရှူပါလေ။ “ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့၊ ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားရခြင်းရဲ့ မူလအရင်းခံဇာစ်မြစ်ကို လေ့လာကြည့်ရင် ကိုလိုနီခေတ်ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့တို့ လက်ထက်ကတည်းက ကျင့်သုံး ခဲ့တဲ့ သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကြောင့်နဲ့ နိုင်ငံရေး၊ အယူဝါဒရေး၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ကြောင့်ဆိုတာတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အကြားမှာ ပြဿနာကြီးငယ်တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ အကြားမှာသာ မကျေနပ်ချက်တွေ၊ တောင်းဆိုချက်တွေရှိကြောင်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်”...
Page2of 909«12345...909»